Madaxweynaha Puntland oo kulan qado Sharaf ah la qaatay Ganacsato Soomaaliyeed
In lacagta shillin Soomaaliga ah dhammaateed sidii hore u shaqayso,marka laga reebo lacagta been abuurka ah iyo midda aan lahayn tayyadii lacageed ee loo baahnaa.
si loola socdo dhaqdhaqaaqa lacagaha, wixii ka badan 50,000,000 Sh. So, (konton milyan), waxaa la marinayaa Bangiga Dawladda Puntland.
Waxaa lagu heshiiyey in sarifka lacagta lagu ilaaliyo halkii doolarba sideed iyo labaatan kun ( 28, 000 Sh. So).
Gaariga lagu haystey Gaalkacayo waxaa lagu sii daynayaa shuruud la’aan kharashka hawsha gaarigaas ku baxayna sidii ay hore uga heshiiyeen waxaa bixinaya Dawladda Puntland iyo Galmudug.
Dawladda Puntland waxay gaadiidka badeecadaha u wada gobolada dhexe ee Soomaaliya ( transit goods) ka cafisay lacagta dejinta ee lagu qaadi jirey kastamka Gaalkacayo.
Waxay Dawladda Puntland u fududaynaysaa gaadiidka badeecadaha u wada gobolada dhexe ee Soomaaliya safarka, waxaa reeban in gaadiidka raran lagu xayiro Kastamada Puntland, waana in saraakiisha Kastamada Puntland si hufan u gutaan waajibaad kooda,
Waxaa la isla gartay in si wadajir ah looga wada shaqeeyo sidii dib loogu furilahaa waddada laamiga ah ee isku xirta dalka ee ka xiran dhinaca koonfureed ee Gaalkacayo.
Dhammaan qodobada kor ku xusan waxaa lagu samaynkaraa dib u eegis markii loo baahdo.